Dhageyso:Labo wiil oo walaal ah oo uu walaalkood ku dilay Mareykanka – Gedo Times
Dhageyso:Labo wiil oo walaal ah oo uu walaalkood ku dilay Mareykanka
2nd May 2021 admin Wararka Maanta 0
Labo wiil oo xuffaad ah oo walaalo isla markaana Taraawiixda ka dujin jiray masjidka Al-Taqwa ee magaalada Kansas City, ee gobolka Missouri ayaa lagu dilay gurigooda hortiisa xilli ay ka baxeen masjidka.
Dilka wiilashaan ayaa waxaa geystay walaalkood ka weyn kaasi oo dilkooda u adeegsaday qori isla markaana ku sugayay meel aan ka fogeyn albaabka guriga,rasaasta waxaa ka fakaday wiil 3aad oo la socday.
Sheekh Mustaf Sheekh Abdirahman imaamka masjidka Al-Taqwa oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa noo xaqiijiyey dilka wiilasha uu dhacay xilli ay ka baxeen masjidka isla markaana ay aheyd mid argagax badan ku reebtay Soomaalida.
Ciidanka Booliska Magaaladaasi ayaa toogtay wiilka dilka geystay xilli uu isku dayay in uu rasaas ku furo booliska oo doonayay in ay qabtaan halkaasina uu ku geeriyooday.
Wiilasha walaalaha ee uu dilay walaalkood ayaa lagu kala magacaabi jiray Cabdiwaxiid Cabdicasiis iyo Cabdiraxmaan Cabdicasiis halka wiilka dilka geystay oo ay toogteen ciidanka Booliska lagu magacaabi jiray Hanad Cabdicasiis.
Puntland oo Ganacsade kasoo jeeda Hiraan Xabsi iyo dil koronto isugu dartay
Dhageyso:Wasiirka Dube oo ka tacsiyeey geerida ku timid fanaan Cabdi Qaboojiye